NGOLWESITHATHU, ngoSeptemba 23, 2015, iQumrhu Elilawulayo lachazela intsapho yaseBheteli ngotshintsho olwaluza kwenziwa ukuze imali yeminikelo isetyenziswe kakuhle. NgoMgqibelo, Oktobha 3, 2015, isaziso esivela kwiQumrhu Elilawulayo sathi: “AmaFilipi 1:10, athi ‘simele siqiniseke ngezinto ezibaluleke ngakumbi.’ Sisenza ngokuvisisana nala mazwi, sifuna ukunikela ingqalelo kwimisebenzi efaka isandla ekomelezeni ukholo lwabantu bakaThixo nasekuhambiseleni phambili umsebenzi wokushumayela owenziwa ehlabathini lonke.”
UStephen Lett weQumrhu Elilawulayo wathi kwiJW Broadcasting: “IQumrhu Elilawulayo lizimisele nyhani ukuxhasa uBukumkani entsimini kangangokuba siye sazama ukubona iindlela esinokonga ngazo imali emasebeni ukuze isetyenziswe entsimini. Ngokomzekelo, eminye imisebenzi ibikade isenziwa eBheteli ngoku incitshisiwe okanye ayisenziwa. Olu tshintsho luza kubangela ukuba abe mbalwa amalungu entsapho yaseBheteli adingekayo.”
Ngenxa yoko, ukususela ngoSeptemba 2015, amalungu ayi-5 500 eentsapho zaseBheteli ehlabathini lonke aye abuyela entsimini. Nangona olu tshintsho luye lwadinga uhlengahlengiso oluninzi, besisoloko siyibona intsikelelo kaYehova, ibe luye lwabangela ukuba uhambele phambili umsebenzi wokushumayela.
Esinye isibini saseSri Lanka esacelwa ukuba sibuyele entsimini, sasijonga esi sicelo njengethuba lokubonakalisa ukholo lwaso kuYehova nendlela esiyithembe ngayo intlangano yakhe. Sathi: “Sasingaqinisekanga ukuba ikamva lisiphathele ntoni. Kodwa sasiqinisekile ukuba uYehova soze asilahle. Sathandaza sathi, ‘Siyakucela Yehova, enoba sijongana nayiphi na imeko, sincede sikwazi ukwenza uhlengahlengiso ukuze sihlale singoovulindlela.’ Kwinyanga yokuqala, sasingenazinto zingako zokuzixhasa. Sekunjalo, sasilubona uthando nenkathalo kaYehova, ibe ngoku sinemali eyaneleyo. Sixakeke nyhani, ekhaya, emsebenzini nakubuvulindlela. Kodwa siyakwazi ukulisebenzisa kakuhle ixesha lethu ngenxa yoqeqesho esalufumana eBheteli. Ayikho into enokuthelekiswa nokunceda abantu bazi inyaniso, ibe sivuyiswa kukwenza oko singoovulindela.”
Amanye amalungu aseBheteli aye acelwa ukuba aye entsimini eColombia, aye afunda ulwimi olutsha aza ayokuhlala kwezinye iindawo ukuze ashumayele. Aba bazalwana noodade bayintsikelelo kumabandla abo amatsha. Omnye umveleli wesiphaluka wathi ngesinye isibini esasithunyelwe kwibandla elikwisiphaluka sakhe: “Abazalwana noodade ebandleni bayaluxabisa uncedo lwabo. Ngoku ibandla liyithanda nangakumbi intsimi, ibe nabazalwana basekuhlaleni baqeqeshelwa ukusebenza nangakumbi ebandleni.” Abanye abebekade beseBheteli ngokusisigxina ngoku basebenza ngeentsuku ezithile.
Omnye umzalwana owayekhonza kwiBheteli yaseJapan kangangeminyaka eyi-31 wacelwa ukuba aye kwelinye ibandla elinabadala ababini kuphela. Ekubeni ibandla laliza kulungisa iHolo YoBukumkani, waceba ukuba angaphangeli iveki ezimbini. Kodwa ngaphambi kokuba lo msebenzi uqale, ummandla waseKumamoto apho kwakukho elo bandla, wahlaselwa yinyikima. Ekubeni wayengasebenzi ngelo xesha, lo mzalwana wakwazi ukuncedisa amaxhoba nokwalusa abazalwana noodade. Uthi, “Xa ndiyicinga yonke le nto, ndibona ngathi uYehova wasibeka ngabom kwenye yeendawo ezaziza kudinga uncedo.”
UPhil noSugar, ababengamalungu eBheteli yaseAustralasia, bathi: “Xa sacelwa ukuba siye entsimini, sasizimisele ukuphila ubomi obulula. Sathandaza saza sacela uYehova asinike ulwalathiso oluya kusinceda senze izigqibo ezilungileyo aze asikelele nasiphi na isigqibo esisenzayo. Sasikufuna ngamandla ukuya kwintsimi yebandla elikwelinye ilizwe. UYehova uye wasisikelela nyhani isigqibo sethu waza wasivulela indlela ukuze simkhonze ngomphefumlo wethu uphela!” Ngoku bakhonza kwiqela lesiNgesi elikwiSiqithi saseSamal, eDavao, ePhilippines, apho kukho abavakalisi abayi-34 noovulindlela abathe ngxi abayi-9. Baneeadresi zabantu abanomdla abayi-120. “Kusekho umsebenzi omninzi owonwabisayo osamele wenziwe. Siyavuya kuba siye sathembela kuYehova. Oko kuye kwalomeleza ukholo lwethu saza samthanda ngakumbi!”
Omnye udade ongatshatanga eRashiya owacelwa ukuba abe nguvulindlela okhethekileyo uthi: “Ubuvulindlela bundinceda ndibe nenxaxheba engakumbi kowona msebenzi ubalulekileyo wokushumayela ngoBukumani bukaThixo, msebenzi lowo ongayi kuze uphinde wenziwe. Kuyandivuyisa ukusetyenziswa nguYehova.” Ngoku uqhuba izifundo zeBhayibhile ezintandathu. Izifundo zakhe ziquka abantu baseIraq, abaseNigeria, abaseSri Lanka, abaseSiriya nabaseZambia.
EZambia: Abanye babo babengamalungu aseBheteli bamkelwa libandla labo elitsha
Amanye amalungu amaninzi ebekhonza eBheteli eZambia aye acelwa ukuba abe ngoovulindlela abathe ngxi. Ayakuvuyela ukushumayela. UAndrew onguvulindlela kunye nowakwakhe uthi, “Ethubeni nje simkile eBheteli, sanceda abantu ababini abangafundanga bakwazi ukufunda nokubhala. Omnye wezifundo zethu ngumfanyana oneminyaka eyi-10, ibe kungekudala uza kunikela intetho yakhe yokuqala kwiintlanganiso zaphakathi evekini. Esinye isibini esitshatileyo esancokola naso, saya kwiSikhumbuzo ibe ukususela ngoko siza rhoqo kwiintlanganiso. Siqhuba kakuhle kakhulu kwisifundo saso seBhayibhile. Sivakalelwa kukuba konke oku ngekungakhange kwenzeke ukuba besingakhange siluthobele ulwalathiso lukaYehova, siyibone inkxaso yakhe, size silindele iintsikelelo zakhe.”
UEdson noArtness, abahlala eZambia, babeneenyanga ezimbalwa betshatile xa bacelwa ukuba baye entsimini. UArtness uthi: “IBheteli isiqeqeshile satsho sakwazi ukuyisebenzisa kakuhle imali yethu nokusebenzisa izinto esinazo nokuba zimbalwa size sihlale sonwabile singenamatyala. Asizisoli ngokuya eBheteli. Siye safunda indlela yokuzibekela usukelo enkonzweni nokulufikelela ngoncedo lukaYehova. Ukholo lwethu kuYehova luye lwahlaziyeka, ibe sizimisele ukuhlala singagungqi ekukhonzeni uYehova.”